Uvumbulule ithalente ngengoma iNomathemba
UVUSI Nova uthe ujabule ngendlela abantu abaphendule ngayo ebanxusa ukuthi bacule naye engomeni yakhe entsha iNomathemba
FANELESIBONGE BENGU | May 21, 2020
UMCULI uVusi Nova uthi uvumbulule abantu abaningi abanethalente ngomncintiswano lapho ecele khona abalandeli bakhe ukuthi bacule ingoma yakhe entsha iNomathemba.
Ubanxuse ukuthi bathumele ama-voice notes ngoWhatsApp becula ikhorasi yengoma yakhe ngaphambi kokuthi iphume.
Uthathe amaphimbo wawafaka engomeni ephume ngoLwesihlanu.
“Ngibonile ukuthi ngenxa kathaqa asiphumi endlini senze izinto ebesizenza. Ngesikhathi ngiqopha angikwazanga ukuthola abaculi abangisizayo ngase ngithi kungaba njani uma abalandeli bengisiza ngekhorasi. Ngicele ezinkundleni zokuxhumana,” kusho uVusi.
Uthe indlela abantu abaphendule ngayo ubengayilindele ngoba babe yizinkulungwane.
“Lokhu kungikhombisile ukuthi singabantu baseNingizimu Afrika sinobuntu kangakanani futhi kungikhombise nokuthi abantu bawuthanda kangakanani umculo wami. Kubo bonke abantu abayizinkulungwane sinciphisile safika ku-800. Kube umsebenzi omkhulu ngoba izinga belingekho phezulu kwazise baqophe ngeselula. Sihlanganisile ngaphandle kokumosha ingoma. Kumanje ingoma isendaweni yesithathu ku-iTunes ngokuthengwa. Kuyakhombisa ukuthi izoba yingoma ethandwayo,” kusho yena
Uthe uzophinde ahlunge bonke abathumele amaphimbo akhethe oyedwa azompika kwenye yezingoma ezizoba kwi-albhamu yakhe azoyikhipha ngaphambi kuka-Agasti.
“Noma ngabe ngubani ozwa sengathi ungumbhali wezingoma akazithumele. Ukuthi iculwa yimi akusho ukuthi eyami kodwa imali iya koyibhalile. Awudingi ukuba umculi ukuze ubhale. Kunabaculi abangakwazi ukubhala,” kusho uVusi.
Uthe ingxenye yenzuzo azoyenza ngemali uzoyinikelela abakhahlanyezwe yi-Corona.